नायिका नन्दिताको यो कस्तो प्रेम ? (भिडियो) « Mazzako Online
नायिका नन्दिताको यो कस्तो प्रेम ? (भिडियो)
मन न हो, मनले चाहेपछि कस्को के लाग्छ र ?? तर… मनले चाहेका सबैकुरा सधै कहाँ नै पुरा हुन्छ र ? जे भएपनि अन्तत: चोखो प्रेम भने सधै अमर रहन्छ युग युगसम्मको लागि । नन्दिताको प्रेमले यही भन्छ । हजुर, हामी उनको रियल होईन रिल लाईफको कुरा गरिरहेका छौं ।
भर्खरै उनी अभिनिय एक म्युजिक भिडियोको कथा सार हो यो । ‘सङ्गलो यो मन’ बोलको गीति भिडियो भर्खरै सार्वजनिक गरिएको छ । रिदम स्क्रिन क्रिएसनको ब्यानरमा बनेको यस गीति भिडियोलाई कमल राई र भुवन रनपालले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा नायिका नन्दिता केसी र भानु तिवारीले अभिनय गरेका छन् ।
गायक किरण गजमेर र गायिका टिका लामिछानेको आवाज रहेको यस गीतमा अम्बर तुम्बापो सुब्बाको संगीत रहेको छ । गीतमा शब्द मनिष अधिकारीको छ । गीत सुन्दा जति राम्रो लाग्छ, भिडियोले पनि आँखालाई उत्तिकै शितलता प्रदान गर्छ । भिडियोलाई अमेरिकामा सुटिङ्ग गरिएको हो ।
‘जुलेबी’मा प्रदीप र पूजाको रोमान्स